I-Studio elula "Štalca 3" ene-terrace
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEma
Kwabo bafuna ukonwabela intsomi yasebusika kwi-Krvavec ski-slopes okanye ufumanise nje indalo, ukukhwela ibhayisekile kunye neendlela zokuhamba intaba, istudiyo esimnandi ✶Štalca 3✶ lukhetho olugqibeleleyo!
→ ibekwe phantsi kweentaba zeKrvavec
→ iLjubljana - i-25 km yendlela enkulu
→ kuphela iikhilomitha ezi-4 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseBrnik - uqhagamshelo lomoya olukhulu
→ "Burger & Pizzeria Štalca" kwipropati
→ Indawo yokupaka SIMAHLA
→ indawo yokuthengisa amatikiti okudlula
♥ iqela labahlobo
♥ iintsapho kunye nabantwana
♥ abathandi bendalo
♥ abathanda ezemidlalo
Isitudiyo esiSweet ✶Štalca 3✶ sinokwamkela abantu abathandathu ngokukhululeka. Ilungele iintsapho (abantwana bamkelekile) okanye iqela labahlobo aba-6, kodwa siya kuvuya ngakumbi ukubamba iindwendwe kunye nezibini njengabahambi ababodwa.
Nceda uqaphele ukuba le yindlu yesitudiyo ethetha ukuba akukho zicango kumagumbi okulala!
★ AMAGUMBI aneebhedi ezimbini ezinebhedi enye. Qaphela, ukuba kufuneka unyuke izinyuko ukuya kwigumbi lokulala.
★ Ibhedi yesofa ikwiGUMBI YOKUHLALA apho abantu ababini banokulala khona. Kukho nendawo yokutyela kunye nokufikelela kwi-terrace enkulu.
Sibonelela ngezinto zokulala ezicocekileyo, imiqamelo eyongezelelweyo, kunye neengubo, iitawuli.
★ Ikhitshi encinci kunye nelula enefriji onayo. Ungaodola isidlo sakusasa nge-4,80 euro / umntu okanye isiqingatha sebhodi yokutya ukuze ufumane intlawulo eyongezelelweyo kwindawo yokutyela ephantsi kwe studio.
★ Igumbi lokuhlambela eliqaqambileyo nelicocekileyo lineshawa. Iitawuli zikhona. Akukho zishampu kwigumbi lokuhlambela.
→ Indawo efanelekileyo yokugcina iskis kunye neebhutsi zokutyibiliza
→ Isiyonyi zinwele
→ Imeko yomoya
→ Ukufudumeza ebusika
→ Iayini kunye nebhodi yokuayina
Ngesicelo nikezela ngentlawulo eyongezelelweyo:
→ Imisebenzi emininzi (utitshala wokutyibilika etyibilikeni, ukwakha iqela, amaqela anemixholo, iminyhadala eyothusayo...)
→ amatikiti okudlula eski eKrvavec
→ ukurenta kwi-ski
→ izithuthi ukusuka okanye ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseBrnik
→ uthutho kwimoto yentambo yaseKrvavec
❀❀❀ AMAQELA AVUMELEKILE KUPHELA "KWEBurger & Pizzeria Štalca"!❀❀❀
I-Cerklje na Gorenjskem ime kumntla-mpuma wesitya seLjubljana, ukusuka kwidisins ukuya kwindawo ephakamileyo yeentaba zeKamniško-Savinjske Alps. Kukuqhagamshelwana kwakho kokuqala neSlovenia kunye nomhlaba wayo oluhlaza weAlpine xa usuka kwinqwelomoya.
ISitudiyo esiSweet & esiLula ★Stalca 1★ ikwindawo ezolileyo phantsi kwentaba yaseKrvavec engqongwe ngabantu basekuhlaleni abanobuhlobo. NJENGOKO ISAZIYO, i-KRVAVEC YEYOPHELA I-SKI RESORT E-EUROPE, UKUBA AYIKHO EMHLABENI, EKUFUTSHANE NE-INTERNATIONAL AIRPORT. LE YI-ADVANTAGE ENGUMANGALISO.
Igrosari ekufutshane yiMercator kumgama nje oyi-50 m ukusuka kwiStudio Štalca. Eyesibini (ivenkile enkulu yeMercator). I-ATM, ikhemesti, iposi, ithala leencwadi, ivenkile yenyama ikumgama we-300 m radius. Kukwakho neevenkile ezahlukeneyo, iibha, kunye neendawo zokutyela ezikufutshane. Nceda usazise ukuba ukhangela uhlobo oluthile lwevenkile okanye indawo yokutyela, kwaye singakukhomba kwicala elifanelekileyo!
❶ Inqaba yaseStrmol - yenye yezona nqaba zindala nezigcinwe kakuhle eSlovenia.
❷ ICawa kaMariya oNgcwele weSibhengezo kunye nendlu yeemonki iVelesovo eAdergas
❸ Indlu kaHribar
❹ I-Mary ye-Snows Chapel kwi-Mt Krvavec
❺ Indlu yokuzalwa ka-Ignacij Borštnik
Umbuki zindwendwe ngu- Ema
Umamkeli uNataša uyakulinda ekufikeni kwakho ukuze akunike izitshixo kwaye akubonise indawo. Nceda usazise ixesha lakho lokufika ubuncinane usuku olu-1 ngaphambi kokufika ukuba kunokwenzeka.
Umamkeli uNataša uyakulinda ekufikeni kwakho ukuze akunike izitshixo kwaye akubonise indawo. Nceda usazise ixesha lakho lokufika ubuncinane usuku olu-1 ngaphambi kokufika ukuba kun…